လွယ်လွယ်ကူကူစားသောက်မှုအား လှုံ့ဆော်ခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ။ | HapEye
လွယ်လွယ်ကူကူစားသောက်မှုအား လှုံ့ဆော်ခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ။
ဆားနဲ့ဆောက်တဲ့ဟိုတယ် (Salt Hotel Bolivia)
၆။ လွယ်လွယ်ကူကူစားသောက်မှုအား လှုံ့ဆော်ခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ။
နံပါတ် (၅) အချက်ကို ဖတ်ရှုချင်လျှင် အောက်ဖော်ပြမှ linkမှ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ https://hapeye.net/archives/6871
ကျွန်တော်တို့ နိမ့်ကျမှုကို ခံစားရစဉ်တွင် ကျွန်တော်တို့ကို မြှင့်တင်မှုတစ်ခုပေးရန် ကြိုက်နှစ်သက်သော အစားအစာအား လက်လှမ်းရန် လွယ်ကူနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း သက်တောင့်သက်သာဖြစ်သော စားသောက်မှုက အခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးဝါးအောင်သာ လုပ်တတ်သည်။ သက်တောင့်သက်သာ စားသောက်မှုကို လှုံဆော်ခြင်းက စိတ်ဖိစီးခြင်းတန်ပြန်မှုမှ လာသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခံစားရသောအခါ စိတ်ဖီးစီခံရတတ်ကြသည်။
ဤအရာက ကျွန်တော်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျွန်တော်တို့ တိုက်ခိုက်ခံနေရကြောင်း၊ တိုက်ခိုက်သူကို ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ချင်လည်း ရင်ဆိုင် သို့မဟုတ် ထွက်ပြေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်စေသည်။ ဤရွေးချယ်ချက်နှစ်ခုစလုံးက လျင်မြန်စွာ အသုံးပြုနိုင်သော အပိုစွမ်းအင်လိုအပ်သည်။ ဤအရာက သကြားကို ဆိုလိုသည်။ သို့သော်လည်း သကြားမြှင့်တင်မှုက အလွန်ကြာရှည်စွာ တည်တံ့မည်မဟုတ်ပေ။ ကိတ်မုန့်အပိုတစ်ချက်စားခြင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အလိုလိုက် အလျော့ပေးလွန်းကြောင်း ခံစားရအောင်လုပ်ပြီး ပိုမိုဆိုးဝါးစွာ ခံစားရအောင်သာ လုပ်လိမ့်မည်။
သင် အဆာပြေစားသောက်လျှင် သစ်သီး သို့မဟုတ် အခွံမာသီးများကို ကြိုးစား စားသုံးပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားပါ။
ဆုပြည့်စုံထွန်း(အယ်ဒီတာအဖွဲ့) ဘာသာပြန်ထားသော စိတ်ချမ်းသာဖို့ အကြံပြုချက်၅၀ စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးသူငယ်တို့သည် အတုမြင်၊ အတတ်သင်ဖြစ်သော ညွှတ်ပျောင်းလွယ်သည့် စိတ်ထားရှိရာကား မိမိနေထိုင်ရာဒေသ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ထိတွေ့မှု၊ အကျင့်စရိုက်တို့သည် များစွာ ရိုက်ခတ်လွှမ်းမိုးစေလေ၏။
ORANGE ဆိုတာ လိမ္မော်သီး မဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဗလာသီးလို့ပြောရင် ပြန်ငြင်းမယ့်သူတွေ များမှာပဲ။ ORANGE ဆိုတာ လိမ္မော်သီးလို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျောင်းမှာသင်ခဲ့တာ။ အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ အော်ကျက်ခဲ့တာ။ အိပ်ပျော်နေချိန်နှိုးမေး ORANGE ကို လိမ္မော်သီးလို့ပဲ ပြောမှာ။
Softwareတခုဘယ်လိုရေးကြလဲ? (အပိုင်း ၁)
Q ငါးလုံး အကြောင်း
ဝှက်ဖဲ အပိုင်း (၃၊ ၄)
ဝှက်ဖဲ အပိုင်း (၂)
ဝှက်ဖဲ အပိုင်း (၁)
© Copyright 2021. All Right Reserved & Powered by Hap Eye Co., Ltd. / DigitalMarketing.com.mm